Paragoay : Nahemotra ny Fifaninanana Hazakazaka Fiarakodia “Trans-Chaco” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Mey 2018 2:46 GMT
Isantaona, tonga ao amin'ny faritra paragoaiàna ao Chaco ireo mpamily fiarakodia kalaza erantany mba handray anjara amin'ny fifaninanana hazakazaka fiarakodia Trans-Chaco, izay efa fanao hatramin'ny 1971. Tamin'ity taona ity, ny faritr'i Grand Chaco manokana dia tratry ny haintany. Nambara ny fepetra fanao amin'ny tany latsaka an-katerena ho an'io faritra io. Mifandray amin'izay dia nambaran'ny governemanta fa mety ho ahemotra ilay fifaninanana hazakazaka fiarakodia [esp], tamin'ny filazana fa ilaina ny famelàna ireo mpirotsaka an-tsitrapo hitondra fanampiana ho an'ireo fianakaviana 18.000 ao amin'ilay faritra, tafiditra amin'izany ireo fianakaviana teratany tompontany.
Tsy miombona hevitra amin'ilay fanafoanana ny hazakazaka i Carlos Rodriguez de Rescatar [amin'ny teny espaniola, toy ireo bilaogy rehetra tanisaina ato anaty lahatsoratra], ary manazava ny nahatonga ny governemanta ho tonga amin'izao fanapahankevitra izao:
Rehefa manambara fepetra ho an'ny tany latsaka an-katerena toy izao, dia lanjalanjaina amin'ny maso mahay mandinika ny zavamisy voajanahary sy ny vokany amin'ny fanànana, ny fotodrafitrasa ary ny faharefoan'ny mponina eo an-toerana. Nisy ekipa teknika nandanjalanja ny fiantraikany amin'ny asa andavanandro sy ny fandrosoana ka nandroso hevitra handraisana fepetra mba hampihenana io faharefoana io sy hanalefahana ny fiantraikan'ny haintany. Anisan'irey sosokevitra ireny ny fampiatoana ilay hazakazaka fiarakodia.
Mampanontany teny an'i Marta Escurra ny hoe vokatra hafa toy inona no mety hateraky ny fampiatoana ilay hazakazaka:
Andro vitsivitsy no aharetan'ilay hazakazaka fiarakodia, ary eny… tena marina fa ao anatin'ny zavamisy tahaka izany, dia misy “zavatra hafahafa” mitranga ary tsy mantsy mipoitra eny anatin'ireo gazety mpamendrofendro no iafaràny. Saingy marina ihany koa fa ankoatra ireo mpamily, misy olona hafa miankina ara-toekarena amin'ilay fifaninanana, ary izany dia mety ho hany fidirambola ho azy mandritra ny taona iray manontolo.
Ny hirifiry atrehan'ireo fianakaviana dia tsy voafetra fotsiny ho an'ny faritr'i Chaco, ary nandinika ireo olona akaiky indrindra ny toeram-ponenany no sady nanoratra toy izao i Jorge Torres Romero :
Olana iray hafa. Nambara ny hamehana manoloana ny haintany, saingy i Camilo (Soares, Minisi-Panjakana misahana ny fiahiana ara-tsosialy) manindrahindra ny areti-nify, ny aretin'ny taovam-pisefoana ary olana hafa momba ny fahasalamana izay manjo ireo fianakaviana ao anatin'ny vondrom-piarahamonin'ireo teretany tompontany. Tsy mila mandeha lavitra. Eto amin'ny manodidina an'i Asunción, eo amin'ny iray kilaometatra monja miala ny biraoko, afaka mahita olona manana olana amin'ny areti-nify sy olana ara-pisefoana mbola henjana kokoa, vokatr'ireo fako sy fandotoana. Nahoana ry zareo no tsy manambara ny fepetra ho an'ny tany latsaka an-katerena ho an'ireny faritra ireny?
Betsaka no sorena tamin'ilay fampiatoana ny hazakazaka fiarakodia, izay hetsika ara-panatanjahantena malaza be rahateo ao amin'ny firenena aorian'ireo lalao baolina kitra.